ဂျင်းက COVID-19 ကိုကာကွယ်ကုသနိုင်တဲ့ အထောက်အထားမရှိပါ - Factcrescendo Myanmar | The Leading Fact Checking Website
ဂျင်းက COVID-19 ကာကွယ်ကုသနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ပို့စ်တစ်ခု လူမှုကွန်ယက်အသုံးပြုသူကြားမှာ ပျံ့နှံ့လျက်ရှိတာတွေ့ရပါတယ်။
ပျံ့နှံ့လျက်ရှိတဲ့ ပို့စ်မှာ ဂျင်း ဆားပြုတ်ရည်ကို နာရီဝက်လောက်ကြိုသောက်ထားမယ်ဆိုရင် COVID-19 ပိုးမတွေ့ နိုင်ဘူးလို့လည်း ပြောကြားထားပြီး “ဂျင်း၊ဆားပြုတ်ရည်ဟာ လည်ချောင်းဝ၊ ချွဲအရည်ကြည်မှာ ပိုးကို ခိုကပ်အား မယူနိုင်အောင်၊ ကြာရှည် မနေနိုင်အောင် မောင်းထုတ်နိုင်တယ်ဆိုတာမျိုး ဖြစ်ဖို့များပါတယ်။ သူကြာကြာ မနေနိုင်ရင် ပွားများလာပြီး အဆုတ်နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဆက်တိုက်ခိုက်ဖို့ အင်အားလျော့နည်းသွားစေတဲ့ သဘောဖြစ်ပါတယ်”လို့ “Min Han”အမည်နဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်အသုံးပြုသူကရေးသားမျှဝေထားတွေ့ရပါတယ်။
တကယ်တော့ ဒီလိုပြောဆိုချက်ဟာ ကိုယ်ပိုင်ယူဆချက်တစ်ခုဟာဖြစ်ပြီး ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမှာ ကာကွယ်ကုသနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အထောက်အထားမျိုးမရှိတာတွေ့ရပါတယ်။
အမေရိကန်အမျိုးသားသိပ္ပံအဖွဲ့အစည်းက ဂျင်းကို စားတာဖြစ်စေ ဂျင်းလက်ဖက်ရည်ကို သောက်တာဖြစ်စေ ဂျင်းပါတဲ့ဆေးလုံးကို စားတာဖြစ်စေ ဂျင်းမှုန့်ကို ရှူတာ၊ အစားထဲမှာ ဂျင်းမှုန့်ထည့်စားတာဟာ COVID-19 ကို ကာကွယ်နိုင်ကုသနိုင်တာမျိုးမရှိပါဘူးလို့ ပြောကြားထားပါတယ်။ ဂျင်းကို သံပုရာသီးထည့်၊ ကြက်သွန်ထည့်၊ ပျားရည်၊ ရှာလကာရည်ထည့်တာမျိုးကြောင့်လည်း COVID-19 ကို ကာကွယ်နိုင် ကုသနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အထောက်အထားမျိုးမရှိပါဘူးလို့လည်း ဆိုပါတယ်။ အောက်ပါလင့်ခ်မှာ ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
တစ်ချို့သော အနောက်တိုင်းဆေး၊ တိုင်းရင်းဆေးနဲ့ အိမ်တွင်းကုထုံးတစ်ချို့က COVID-19 ရောဂါလက္ခဏာကို သက်သာအောင်သို့မဟုတ် ရောဂါလက္ခဏာပျောက်ကင်းအောင် ပြုလုပ်ပေးကောင်းပြုလုပ်ပေးနိုင်ပေမဲ့ ကာကွယ်နိုင် ကုသနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ဆေးဝါးတစ်စုံတစ်ရာမရှိသေးကြောင်း ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့(WHO)ရဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အမေးအဖြေကဏ္ဏမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အနေနဲ့ ပဋိဇီဝဆေးဝါးများအပါအဝင် ကိုယ့်စိတ်အထင်ဆေးကုသတာမျိုးကို အားမပေးကြောင်းလည်း ရေးသားထားပါတယ်။ ထို့အပြင် COVID-19 ကို အကောင်းဆုံးကာကွယ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကတော့ လက်ကို စနစ်တကျနဲ့ မကြာခဏဆေးကြောတာ၊ မျက်စေ့၊နှာခေါင်းနဲ့ ပါးစပ်တွေကို လက်နဲ့ တို့ထိကိုင်တွယ်တာမျိုးရှောင်ရှားတာ၊ နှာချေချောင်းဆိုးရာမှာ တံတောင်ကွေး သို့မဟုတ် တစ်သျှူးနဲ့ ဖုံးအုပ်ပြီးမှ ချောင်းဆိုးနှာချေတာ၊ နေ့စဉ်ဘဝမှာ တစ်ယောက်နဲ့ယောက် အနည်းဆုံး ၃ ပေအကွာခပ်ခွာခွာနေတာ စတဲ့အချက်တွေက မိမိကိုယ်ကိုအကောင်းဆုံးကာကွယ်နည်းလမ်းတွေအဖြစ်ဖော်ပြထားပါတယ်။ အောက်ပါလင့်ခ်မှာဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
တကယ်တော့ ဒီလို ဂျင်းတက်၊ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ရေနွေးငွေ့ဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကို ကုသနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ပို့စ်တွေ နိုင်ငံတကာက လူမှုကွန်ယက်အသုံးပြုသူတွေအကြားမှာ ဧပြီလလောက်ကတည်းက ပျံ့နှံ့ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဒီလိုပြောဆိုချက်တွေဟာ အထောက်အထားမရှိပါဘူး။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ ကျန်းမာရေးအရေးပေါ်အစီအစဉ်က အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ မိုက်ကယ်ရွိုင်ရယ်ကလည်း “တစ်ယောက်ယောက်ကို နေကောင်းသက်သာအောင်လုပ်ပေးတဲ့အရာ၊ ကောင်းလာမယ်လို့ အာမခံတယ်ဆိုတဲ့ အရာ၊ ကိုယ်တိုင်က အန္တရာယ်မရှိဘူး ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ပိုကောင်း လာမယ်လို့ ထင်တဲ့အရာတွေရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါဟာ ဒီရောဂါကုသရာမှာ ကုသနိုင်စွမ်းရှိတယ်လိုပြောလို့ မရပါဘူး”လို့ ပြောကြားထားပါတယ်။ အောက်ပါလင့်ခ်မှာ ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ဆီနီဂေါနိုင်ငံ ဒါကာဆေးရုံးက ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ကုသရေးပါမောက္ခ Khadidiatou Bâ Fall ကို ဂျင်း၊ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ သံပုရာပြုတ်ရည်က COVID-19 ကိုကုသနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြင်သစ်သတင်းဌာန France24 ကိုအောက်ပါအတိုင်း ဖြေကြားထားတာတွေ့ရပါတယ်။
“ဒီပြုတ်ရည်က COVID-19 ကိုကုသနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ တိတိကျကျညွှန်းဆိုမှုမျိုးမရှိပါဘူး။ သို့သော်လည်း ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကောင်းပါတယ်။ ဗိုက်တာမင် စီ၊ ဗိုက်တာမင် ဘီဝမ်း၊ ဗိုက်တာမင်ဘီတူး၊ ဗိုက်တာမင် ဘီနိုင်း၊ ဗိုက်တာမင်ဒီနဲ့ ဗိုက်တာမင် အီးအပြင် သွပ်၊မဂ္ဂနီစီယမ်နဲ့ ကယ်လစီယမ်လို ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင့်ပစ္စည်းတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီလိုအရည်သောက်ရင် ကျောက်ကပ်ကို ရေဓာတ်ဖြည့်တင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ လူ့ခန္ဓာ ကိုယ်ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းတဲ့အကျိုးရလာဒ်တွေရှိတာ သုတေသနတွေလည်း ရှိပါတယ်။ တစ်ချို့ပစ္စည်းတွေ ကိုယ်ခံစွမ်းအားကို မြှင့်ပေးနိုင်ပါတယ်”လို့ ပါမောက္ခ Khadidiatou Bâ Fall ကပြောခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။
အထက်ပါအချက်အလက်တွေအရ ဂျင်းပြုတ်ရည်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်အတွက် ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အထောက်အထားရှိပေမဲ့ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကာကွယ်နိုင်ကုသနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အထောက်အထားမျိုးမတွေ့ရှိရပါဘူး။
Title:ဂျင်းက COVID-19 ကိုကာကွယ်ကုသနိုင်တဲ့ အထောက်အထားမရှိပါ
1 thought on “ဂျင်းက COVID-19 ကိုကာကွယ်ကုသနိုင်တဲ့ အထောက်အထားမရှိပါ”
Khin Thet Kyaw says:
Thank you for your information. Firstly I will check my post with fact check and this post which is false. I never share it.